विश्व शरणार्थी दिवस 2017: थाह शरणार्थी मानवता मेरो विश्वास पुनःस्थापित | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
द्वारा मत्ती लियोन जुन 9th, 2017 ब्लग, स्वागतको शरणार्थी, विश्व शरणार्थी दिवस
थाह शरणार्थी मानवता मेरो विश्वास पुनःस्थापित
Monga र ECA संग मत्ती लियोन
विश्व शरणार्थी दिवस को सम्मान मा 2017: थाह शरणार्थी मानवता मेरो विश्वास पुनःस्थापित
म पहिले घनिष्ठ मित्र मार्फत स्थानीय शरणार्थी resettlement सुनेका. उहाँले - हुनुको राम्रो उत्तर Dakotan - स्थानीय लूटेराण चर्च संग संलग्न थियो र पास्टर र inclusiveness आफ्नो प्रवचन प्रभावित भएको थियो. चर्च बनाउन उत्तर पश्चिमी अर्कान्सस शरणार्थी resettlement साइट काम थियो, र यो दृष्टि enact गर्न चंदवा NWA गठन गरेको थियो. म अन्तिम गिरावट एक जानकारी सभामा उपस्थित र एक सह-प्रायोजन टोलीले हाम्रो समुदायमा शरणार्थी परिवार ल्याउन मद्दत गर्न नेतृत्व गर्न सहमत. सानो म यो मानवता मेरो विश्वास बहाल तिर पहिलो चरण थियो भनेर थाहा थिएन.
हाम्रो टोली डिसेम्बर मा चंदवा देखि शब्द पायो तिनीहरूले परिवार छिट्टै प्राप्त गरेका थिए र हामी हाम्रो परिवारको आगमन लागि तयारी गर्नुपर्छ.
हामी कदम कूद.
हामी हाम्रो सञ्जाल फर्नीचर खोजिरहेका बाहिर पुगेको, लुगा, र घरेलू वस्तुहरू. हामी के दान गर्न सकिएन र अन्य सार्ने र resettling खर्च मद्दत गर्न खरीद को लागत मद्दत गर्न एक crowdfunding पृष्ठ सेट अप. वस्तुहरू र दानको मा घनघोर आयो. अमेरिकी चर्चित उदार छन्, तर म अझै पनि मान्छे प्रतिक्रिया कसरी छिटो र robustly मा हैरानी थियो.
देश सबै भन्दा मानिसहरूलाई हामी गरिरहेका थिए के मा मूल्य देखे र यो एक भाग हुन चाहन्थे. मानवता विश्वास: पुनःस्थापित.
वर्ष को सुरुमा, हामी शब्द पायो हाम्रो परिवार राखिएको थियो भनेर गरिएको र उडानहरू बुक थिए. तिनीहरूले फेब्रुअरी 4th मा आइपुगेपछि हुनेछ. हामी थियो मात्र जानकारी एक सम्पादित biodata फारम थियो. नाम, उमेर, राष्ट्रियता, शिक्षा र सीप. यी मानिसहरू हुन्. तिनीहरूले नाम छ. ECA. फ्लोरिडा. Mbleci. Monga. तिनीहरूले कांगोलिज छन्, तर बुरुन्डी बस्ने भएको छ लागि 13 वर्ष स्थायी नियुक्ति प्रतीक्षा.
हाम्रो टीम ध्यान आउन हेर्न थाले. यो वास्तविक बन्न सुरु भएको थियो. हामी कदम-मा योजना. ट्रक थियो जो? कसले किराना पसलहरू खरीद थियो? जसले स्वागत भोज खाना पकाउने थियो? त्यसपछि थप तत्काल रसद हामीलाई मारा. हामी एक देशी वक्ता छन्? तिनीहरूले आहार प्रतिबन्ध छन्? के भने कसैले बिरामी वा एक व्हीलचेयर मा? सामान कति तिनीहरूले ल्याउन छन्? हामी पर्याप्त कोठा छन्? यस अघिबाटै जान्ने काम palpable थियो. त्यसपछि यात्रा प्रतिबन्ध भयो.
को यात्रा प्रतिबन्ध को सप्ताह मलाई ईटाहरु को एक टन जस्तै हिट - म परिवार भनेर बाहिर फेला बारेमा बिरामी थियो, पछि 13 वर्ष शरणार्थी रूपमा, आवेदन र अन्तरवार्ता र चिकित्सा जाँच र परिवार इतिहास र आतंककारी vetting को, तिनीहरू केवल पाँच दिन ढिलो थिए. एक बच्चा सैनिक रूपमा गृहयुद्ध र conscription escaping तरिका थियो धारणा छैन नियुक्ति प्राप्त लागि मान्य कारण मात्र होइन निरर्थक तर inhumane थियो, र यो downright दुष्ट महसुस.
जब म त्यस दिन देश भर विमानस्थलको मा प्रतिक्रिया देखे, म आशावान बन्न सुरु. म JFK मा विरोध देखे. म मेरो रक स्टार अध्यागमन वकील अटलान्टा यूहन्ना लुईस संग बसेर भान्जा देखे. म detained मान्छे को trickle निःशुल्क र आफ्नो अनुहार मा डर र भ्रम गरौं देखे, र म भने, 'यो प्रतिबन्ध पछिल्लो सक्दैन।'
म निषेधाज्ञा प्रशंसा र Appeals सम्मेलन निम्न हप्ता कल को 9th सर्किट कोर्ट मा उत्सुकतासाथ मा सुने. जब सत्तारूढ फिर्ता रहन upholding आए, तर पनि रिस - म खुश थियो. के बस भयो थियो? हाम्रो देश मा परीक्षण कस्तो बस आयो थियो?
हाम्रो परिवार फरवरी 13 को लागि यात्रा रहे-बुक र हामी तिनीहरूले यस समयमा आइपुग्दा चाहन्छु कि सतर्क आशावाद थियो. को यात्रा प्रतिबन्ध संग - canopy तिनीहरूलाई बाँच्न नयाँ स्थान पत्ता लगाउन भद्रगोल, तिनीहरूले जम्मा गुमाउने अपार्टमेंट वा जोखिम रद्द थियो - र हामी कदम-मा पुन: योजना थियो, किराना पसलहरू, र पहिलो भोजन. आफ्नो निर्धारित आगमन को बिहान, म तिनीहरू निम्न रात आउनेछ भनेर मलाई बताउन चंदवा देखि एक कल पायो. तिनीहरूले उडान बुरुन्डी बाहिर सम्झना गरे - कसैले किन साँच्चै निश्चित थियो? जहाँ तिनीहरूले भन्सार मा अप आयोजित? हामी गर्न सक्ने सबै अर्को दिन आगो ड्रिल एक पटक थप प्रदर्शन थियो र सबै राम्रो जाने भनेर आशा. अर्को रात, एक वर्षाको प्रणय दिवस र मेरो प्रेमिका संग एक हतारिएको तर मायालु खाना पछि, हामी उत्तर पश्चिमी अर्कान्सस मा हाम्रो परिवार स्वागत.
तिनीहरूले स्पष्ट आफ्नो तीन दिन यात्रा बाट निकास थिए. मौन उत्तेजना संग, हामी तिनीहरूलाई अभिवादन गरे र हामी सामान दावी मा आफ्नो सामान को लागि पर्खेको रूपमा सानो कुरा गर्न प्रयास. त्यहाँ हरेक परिवारको सदस्य लागि कम्तिमा तीन greeters थिए, र म तिनीहरूलाई लागि सबै एक बिट भारी थियो पक्का छु. हामी एक वैन मा घर shuttled, तिनीहरूलाई न्यानो भोजन प्रस्ताव, र तिनीहरूलाई केही बाँकी प्राप्त गर्न शुभ बोली.
अर्को दिन, अर्को सह-प्रायोजक र म शहर वरिपरि तिनीहरूलाई देखाउन प्रस्ताव. हामी विश्वविद्यालय अर्कान्सस परिसर को माध्यम हिंडे, आफ्नो माइग्रेसन कागजातहरू अन्तरराष्ट्रिय कार्यालय बनेको प्रतिहरू (आफ्नो मात्र पहिचान कागजात), हाम्रो विचित्र विश्वविद्यालय शहर को मुख्य सडक तिनीहरूलाई तल हिंडे, र खाजाका लागि तिनीहरूलाई पिज्जा पायो. साझमा, मेरो प्रेमिका र म तिनीहरूलाई विशिष्ट अमेरिकी किराना किनमेल अनुभव देखाउन स्थानीय किराना पसल तिनीहरूलाई लिए. हामी तिनीहरूले एक बिट वस्तुहरूको सरासर नम्बरमा स्तब्ध थिए बताउन सक्छ, तर पनि उत्साहित र उत्सुक. तिनीहरूलाई को एक तिनीहरूले सबै कुराको लागि थियो कति विकल्प मा remarked: हात लोशन गर्न आलु चिप्स देखि. "किन हो त्यहाँ 15 विभिन्न हात लोशन? गाह्रो छनौट बनाउँछ। "हो. हो यसले गर्छ.
अर्को धेरै हप्ता परिवार र सह-प्रायोजक टीम दुवै लागि नयाँ अनुभव भरिएको थियो. सेवन सभाहरू, डाक्टर गर्न यात्रा, बस सिस्टम सिक्दै, सामाजिक सुरक्षा कार्ड लागि लागू. हामी स्थानीय मस्जिद तिनीहरूलाई लाग्न सक्छ भने एक दिन परिवार सदस्यहरूको केही सोधे. म regrettably कहिल्यै भएको र यो कहाँ पनि थाहा थिएन थियो. म आफ्नो वेबसाइट फेला र इमाम इमेल र भेट्न समय प्रबन्ध.
त्यो साझ, हामी मस्जिद प्रवेश र foyer फूल सयौं भरिएको थियो, कार्ड, संकेत, र पत्र. "हामी हाम्रो मुसलमान छिमेकी प्रेम,"" तपाईं फेटीभिल मा स्वागत छ,"" तपाईं प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। "
यो मस्जिद प्रतिनिधिहरु भने यो प्राप्त भएको थियो के को बस एक भाग थियो - तिनीहरूले स्पेस सकिएको थियो. म टाढा Blown थियो. मानवता विश्वास: पुनःस्थापित.
म त त्यो क्षण मेरो समुदाय गर्व थियो, यो मस्जिद गर्न र मेरो पहिलो यात्रा थियो आफैलाई संग अझै दुखी मेरो कार्ड तिनीहरूले प्राप्त गर्नेहरूमध्ये थिएन. म मेरो प्रतिनिधिको सम्पर्क र Islamophobia विरुद्ध सामाजिक मिडियामा बाहिर बोल्दै, घृणा अपराध, र यात्रा प्रतिबन्ध, तर म मेरो आफ्नै सहरमा मेरो भाइबहिनीहरू बाहिर पुग्न असफल भएको थियो.
यो बिन्दु सम्म, मेरो नयाँ मित्र को demeanor बरु गम्भीर थियो. निश्चित, पार्क मा भलिबल खेल्दै गर्दा हामी हाँस्न चाहन्छु, उहाँले JFK मा आइपुगेपछि र आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक हिउँ हेर्न बाहिर हिड्ने को कथा भन्नुभयो वा Monga मूर्ख पाराले हास्नु हुनेछ, तर हामी सबै गम्भीर भएको resettlement लिइरहेको थिए. त्यहाँ हात मा कार्यहरू भन्दा अन्य धेरै समय खर्च गर्न यी पहिलो हप्तामा गर्न धेरै थियो. म परिवार मस्जिद सदस्यहरू संलग्न देखे रूपमा तर त्यो रात परिवर्तन. तिनीहरूले सँगी फ्रान्सेली वक्ता फेला र अझ आफूलाई व्यक्त गर्न सक्षम थिए. उहाँले साँझ प्रार्थना लागि तयारी मा आफ्नो खुट्टा धुन जा भनेर मलाई भन्नुभयो रूपमा Monga अनुहारमा मा ठूलो ठूलो मुस्कान थियो. यो इमाम प्रार्थना र आफ्नो कल थाले जस्तै, एक पहेली टुक्रा नै सुलझाने, म Monga र ECA को ablution फिर्ता scurry र साथ लाइन मा पूर्ण गिरावट देखे 20 या त भक्त. समूह आफ्नो प्रार्थना कविता भन्नु र आफ्नो इशाराहरू प्रदर्शन गर्न थाले, र एक पल को लागि म तिनीहरूलाई अलग आफ्नो भाइहरू बाँकी देखि बताउन सक्छ. नम्रता र कृतज्ञता र सौन्दर्य को पहिचान मलाई धोए र म माथि आंसू गर्न थाले.
यसलाई म तिनीहरू सबै सही हुन जाँदै थिए भनेर बुझे कि त थियो. तिनीहरू यहाँ थिए. तिनीहरूले सुरक्षित थिए. तिनीहरूले खुसी थिए. मानवता विश्वास: पुनःस्थापित.
हामी बिलियर्ड्स एक साँझ खेल्न परिवार बाहिर लगे र तिनीहरूले पूल हल मा प्राप्त गर्न आफ्नो परिचय देखाउन आवश्यक. हामी bouncer नजिक रूपमा, म स्नायु पायो. उहाँले आफ्नो अनौठो स्वीकार हुनेछ, पहिचान रूपमा wrinkled कागज? उहाँले चिसो र तिनीहरूलाई inhospitable हुनेछ? मेरो समुदायमा अन्य मान्छे तिनीहरूका बीचमा मा शरणार्थी कसरी स्वीकार हुनेछ? को bouncer आफ्नो कागजात देख्यो. म उत्सुकता तिनीहरूले हाम्रो नयाँ समुदाय सदस्यहरु थिए बताए र अझै राज्य-जारी आईडी छैन. उहाँले तिनीहरूलाई देख्यो, उहाँले आफ्नो कागजात मा फिर्ता देख्यो. "निश्चित, भित्र आउ. स्वागत! म एक राम्रो समय आज राती छ आशा, र तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ हामी खुसी छौं!"हाम्रो नयाँ मित्र कान-को कान grinned. "धन्यवाद,"तिनीहरूले नयाँ भाषा मा जवाफ. मानवता विश्वास: पुनःस्थापित.
हामी दुई घण्टा पूल प्ले: ठूलो शट, खरोंच, स्थापना र हराइरहेको चाल शट. तिनीहरूले मलाई तिनीहरूले बुरुन्डी मा पूल खेल्न सक्षम थिए पटक को कथा भन्नुभयो र यो कसरी अन्यथा गाह्रो जीवनमा उज्यालो स्थान थियो.
हामी एक साधारण जडान महसुस, एक साझा अनुभव. हामी त फरक थिएनन्; वास्तबमा, हामी राम्रो समान थिए.
अर्को दुई महिना भन्दा बढी, हामी तिनीहरूलाई अमेरिका मा सेट गर्न अप मेहनत गरे. राज्य आईडी, बैंक खाता, जब. हाम्रो नेटवर्क मार्फत, हामी होटल housekeepers र गोदाम कामदारहरूको रूपमा ती सबै लागि जब पाउन सक्षम थिए. निश्चित लागि प्रवेश-स्तर जब, तर जब कि विश्वास ल्याउन, सम्बन्धित एक अर्थमा, र आउन असल कुराहरूको harbinger. हाम्रो परिवार अहिले पुगेको छ 90 दिन र तिनीहरूले आत्म-पर्याप्त छन्. हामी तिनीहरूलाई कसरी आफ्नो बिल भुक्तानी गर्न देखाउन छन्, आफ्नै रेस्टुरेन्ट मा आदेश कसरी, कसरी चलाउनु.
अब साँच्चै रमाइलो सामान हुन सक्छ. बेसबल खेल, पिकनिकको, पोखरी मा शिविर यात्राको. त्यहाँ हुन्छ, को पाठ्यक्रम, अगाडि चुनौतीहरू हुन - तिनीहरूलाई के जीवन छैन? तर तिनीहरू अस्तित्व गोवर बाहिर र ठोस जमीन मा पुल गर्न सक्षम भएको छु. तिनीहरूले मलाई देखाएका छन् साँचो कठिन काम हो के, जस्तै संघर्ष को के वर्ष हेर्न, र अमेरिकी सपना अझै जिउँदै छ भन्ने. मानवता विश्वास: पुनःस्थापित.
बारेमा मत्ती लियोन
म फेटीभिल बस्ने एक मिड-30 सेकेन्ड स्थिरता परामर्शदाता छु, संग. मेरो काम मलाई हामी उपभोग उत्पादनहरु पर्यावरण र सामाजिक प्रभाव पार्ने र कसरी अरूलाई पनि अनावश्यक परिणाम घटाउने समाधान खोज्न सिकाउन अनुमति दिन्छ.